चितवनका २१ वर्षीय विवेकको साइप्रसमा नेपालीले नै गरे ह’त्या ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/चितवनका २१ वर्षीय विवेकको साइप्रसमा नेपालीले नै गरे ह’त्या !
चितवनका २१ वर्षीय विवेकको साइप्रसमा नेपालीले नै गरे ह’त्या !
काठमाडौ, – साइप्रसमा एक नेपाली युवाको ह-त्या भएको छ । उनको च-क्कु प्र-हार गरी ह-त्या भएको हो । ह-त्या हुनेमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१२ का २१ वर्षीय विवेक अम्मगाई रहेका छन् । साइप्रसको राजधानी निकोसिया नजिकैको इभिचिउमा मंगलबार राति साथि साथि मिलेर र-क्सी खाएका थिए । साइप्रसका प्रहरीले जनाए अनुसार उनको आफ्नै कोठामा बस्ने साथी सुवास गिरीले प्र-हार गरी ह-त्या गरेको बताइको छ ।
गम्भिर घाइते भएका विवेकको अस्पतालमा निधन भएको हो । प्र’हार गरी ज्या-न लिएका २२ वर्षीय सुवास गिरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निकोसिया को इभ्रीचिउ गाउँमा एउटै घर मा बस्दै आएका नेपाली बिच झ’गडा हुँदा चक्कु प्र’हार गरि ह/त्या भएको हो ।
स्थानिय मिडियाका अनुसार चक्कु प्रहार गरि गम्भीर घाइते बनाए पछि आरोपीले स्थानिय प्रहरीमा सो घटनाको जानकारी दिदै आ’त्मस’मर्पण गरेका थिए ।पीडितलाई घटनास्थलमा बाट प्रहरीले उद्दार गरि अस्पताल पुर्‍याउदा डाक्टरले मृ’त घोषणा गरेको बताइएको छ । प्रहरीले आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिइ सकेको छ भने अदालत मा आज नै पेश गर्नेछ ।प्रहरीका अनुसार घटनाको थप अनुसन्धान भै रहेको छ ।
कालीगण्डकीमा टिपर खस्दा टिपरसहित चालक बेपत्ता